सबै ध्यान निर्वाचन आयोगतिरः ओली निकट थपलियाले माधवको मुख हेर्ने कि अग्निको ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
सबै ध्यान निर्वाचन आयोगतिरः ओली निकट थपलियाले माधवको मुख हेर्ने कि अग्निको ?
माधवकुमार नेपालले आज नयाँ पार्टी दर्ताको औपचारिकता पाउँदैछन् । आवश्यक मापदण्ड पु¥याएर नेपालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) राख्ने भएका छन् ।
यसअघि राखेको नेकपा एमाले (समाजवादी) नाम राख्न नमिल्ने भएपछि पार्टीले नाम परिवर्तन गरेको हो । राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकै दिन भदौ २ गते नेपालले पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा प्रक्रिया थालेका थिए । आयोगले आज नेपालका केन्द्रीय सदस्यलाई सनाखत गर्न बोलाएको छ । उनीहरुलाई बिहान साढे ११ बजेदेखि २ बजेसम्म बोलाएको हो । नेपालले आवश्यक संख्याभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य सहभागी हुने जनाएका छन् । यो पार्टीको बैठक सोमबार चन्द्रागिरी रिसोर्टमा भएको थियो ।
एमालेको निर्वाचन समितिका प्रमुख अग्नि खरेल मंगलबार निर्वाचन आयोग पुगेर एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई सनाखतमा सहभागी नगराउन आग्रह गरेका छन् । खरेलले सनाखतमा आफूहरुलाई पनि उपस्थित गराउन माग गरेका छन् । एमालेले भदौ ५ गते निर्वाचित ६ र समानुपातिक ८ गरी १४ सांसदलाई कारबाही गरेको छ । तीमध्ये केही केन्द्रीय सदस्य छन् । एमालेले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको, अनुशासन पालना नगरेको भन्दै उनीहरुलाई कारबाही गरेको हो ।
एमालेले उनीहरुलाई सांसदबाट हटाउन पनि संघीय संसद सचिवालयमा पत्र पठाइसकेको छ । एमालेका सांसदहरुले तत्काल उनीहरुलाई कारबाही नगरेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाकहाँ धर्ना पनि दिएका थिए ।
आयोगले नियम अनुसार गर्छ कि एमालेको दवावमा काम गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । आयोग प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया केपी शर्मा ओलीनिकट हुन् । ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा नै उनी प्रमुख भएका हुन् ।
सरकारले जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता भए पुरानो व्यवस्था अनुसार पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा प्रतिनिधिसभाका ४० प्रतिशत सांसदको आवश्यकता पर्नेछ । नयाँ अध्यादेश खारेज भएपछि पुरानै नियम लागू हुने भएकाले सबै दल सुरक्षित हुने सम्भावना रहन्छ । अनलाइनमार्ग बाट